I-Brody PR: Uyishisa Nini Inkampani Yobudlelwano Bomphakathi | Martech Zone
I-Brody PR: Uyishisa Nini Inkampani Yobudlelwano Bomphakathi
NgoLwesithathu, Agasti 19, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Namuhla, kanye namanye ama-blogger anethonya, izintatheli nabaholi bezimboni, ngithole i-imeyili engingacelwanga evela ku-Beth Brody (beth@brodypr.com) ngokukhishwa kwabezindaba kuyo mayelana neJump Start Social Media Publishing a New E-Book on Social Media Marketing For Small Business.
Kwakungekubi ngokwanele ukuthi kwakuyi-SPAM, futhi kwahlinzeka ngokusobala uhlu lwabamukeli ngamagama abo bonke abantu nekheli le-imeyili. Wake wezwa BCC?
Angimazi uBeth futhi angazi Brody PR, kodwa ngizobazisa, kanye nawo wonke amathemba abo namakhasimende, ukuthi bafanelwe ukuhlukunyezwa okukhulu abakutholayo njengamanje. Impendulo eyodwa (phendula bonke) ngentambo enkulu ye-imeyili (eqhubekayo) evela kumuntu ovelele wemboni ufundeka kanje:
Ngisuse kulolu hlu lwama- f — g engingakaze ngicele ukuba kulo futhi angikwazi ukuzikhipha ohlwini lwami.
Uhlu lwabantu lokhu okuphume lwaya ku- ubani wabathonya. Ngenkathi ngijabule engikwenzile the uhlu, futhi ngicasukile ukuthi inkampani Yezobudlelwano Bomphakathi ingahlanganisa uhlu olunje ukumane isenze ugaxekile. Nginesiqiniseko sokuthi i-Jump Start Social Media E-Book iyi-e-book enhle impela… kodwa ngeke ngiyilande, ngiyixhumanise nayo, futhi angiyincomi ngoba ngigwetshwe yinkampani yabo yakwaPR.
Amafemu Obudlelwano Bomphakathi, ngaphezu kwanoma ngubani omunye embonini, kufanele abone umthelela wama-imeyili angacelwanga kanye nokubaluleka kokuxhumana okususelwa ngemvume kulo mhlaba wogaxekile. Nginefomu lokuxhumana engosini yami ukuze abantu bangishiyele umugqa - leyo yindlela enhle yenkampani ye-PR ukuxhumana nami… noma ngokusebenzisa ezinye izindlela zokuxhumana ezingama-80 engixhumana ngazo. Lokhu bekumane nje kuvila PR, kumsulwa futhi kulula.
Manje ikheli lami le-imeyili lisezandleni zikaNkulunkulu-owaziyo-ngobani ngoba i-ejensi eyodwa ye-PR ikhohlwe yonke imithetho ye Ezimayelana Nomphakathi. Ngomusa, manje sengishicilele ikheli labo le-imeyili ukuze umhlaba wonke ulibone. Zizwe ukhululekile ukulahla iBet inothi uma unokwenyuselwa kwakho okulandelayo - ngiyaqiniseka ukuthi bazoyithanda!
UBrody uzophinde afakwe ohlwini olude lwe Ogaxekile be-PR by UGina Trapani. Kungenza ngizibuze ukuthi ngabe uBrody kungenzeka yini ukuthi ubhekene necala lesenzo sekilasi lokwephula isenzo se-CAN-SPAM njengoba benganikanga ndlela yokuphuma ekuxhumaneni kwabantu abaningi.
Ngokuzayo lapho uqasha inkampani ye-PR, thola ukuthi bazobathola kanjani abagqugquzeli ezimakethe nokuthi bazokhuluma nabo kanjani. Uma kufana neBrody PR, ungabaqashi. Abayitholi. Uma unenkampani efana neBrody PR enethonya logaxekile, ibaxoshe. Bazokwenza umonakalo omkhulu kunokulungela umkhiqizo wakho.
Ukufunda Okungeziwe: I-imeyili eyodwa ibulale kanjani inkampani ye-PR, Ngingakujabulela ukuxolisa, Ubudlelwano Bomphakathi buyahluleka: Isifundo kanye nesibhaxu… ngiyaqiniseka ukuthi kukhona abengeziwe abaza…
QAPHELA: 8/21/2009 Uthole okuhle kakhulu kusuka eBeth Brody namhlanje uxolisa nge-snafu, uBeth unendatshana 'yezifundo azifundile' eza maduze.
ISIBUYEKEZO ESIBALULEKILE: 10/19/2009 Ngithole kabusha inothi kusuka kwenye i-Brody PR yokuthi izixhumanisi zethu zazingalungile ku-Post yethu! Siyaxolisa ngobuqotho futhi izixhumanisi zibuyekeziwe.
Tags: NikelaKuzikhangiso Zohlelo Lokusebenzakernukunyathelisa
Izinkampani Zobudlelwano Bomphakathi Zizimisele Ngokusebenzisa Imidiya Yezokuxhumana
Aug 20, 2009 ngo-12: 17 PM
Ingxenye ehamba phambili ngeBrody PR ukuthi lapho ngichofoza ngiya kuwebhusayithi yabo, into yokuqala engiyibonile kwakuyisihloko sabo esiyinhloko esimemezela ngokuziqhenya "I-ejensi enonembeza…"
Uma lokho kungeyona iNdida, angazi ukuthi yini.
Aug 20, 2009 ngo-1: 17 PM
UDoug - abantu abenza lezi zinhlobo zezinto banomqondo ongakholeki wokubaluleka kwabo. Bheka uhlu lwamakhasimende akhe; awuhlatshwanga umxhwele? Noma ungazange ukhethe ukungena, lokho okumele akutshele khona kuhlala kubaluleke kakhulu, kuyakhanya kakhulu ukuthi uqinisekile ukuthi uzokuthokozela ukuthi wakunikeza nge-imeyili yakhe.
Nina bafana bezindaba zenhlalo aniyitholi uma kukhulunywa ngokubaluleke ngempela.
Aug 20, 2009 ngo-1: 42 PM
Siyabonga ngokuthumela lokhu, uDoug. Lobu budlelwano bomphakathi, bese kuba nobudlelwano nabezindaba, bese-ke BAKHO KUFANELE kube ubudlelwano bezokuxhumana (isambulela okufanele abanikeli bososayensi) Ukuhlanganisa lawa amathathu abe yigama elilodwa ukwehluleka okungaguquguquki kuyo yonke imboni, futhi kube nobufakazi bokuthi amafemu amaningi awakutholi.
Aug 20, 2009 ngo-2: 38 PM
Ibushelelezi ngempela indlela owe ngayo ocabanga ukuthi unethonya khona lapho kulayini wokuqala
Aug 20, 2009 ngo-5: 59 PM
Brody PR #ukuhluleka
Aug 20, 2009 ngo-6: 15 PM
wow - yebo lokhu yi-f-up enkulu kepha ngaphandle kokuthi lokhu kuyiphutha eliphindaphindayo kubo kufanele unikeze inzuzo yokungabaza. Abantu banezinsuku ezimbi futhi benza amaphutha kwesinye isikhathi. Kuthiwani uma othile ebiza ikhanda lakho futhi ethatha isixuku se-lynch ngemuva kwakho njalo uma wenza iphutha ngokuhamba kosuku? Lokhu okuthunyelwe bekungahle kube yinto enamandla ngaphandle kokuhlekisa esidlangalaleni i-ejensi nommangali okukhulunywa ngaye. Ngokusobala, kumele ngabe unosuku olubi wena ukuba ube nolaka futhi ulwe.
Aug 21, 2009 ngo-2: 56 PM
Angivumelani. Futhi empeleni, ngicabanga ukuthi lokhu okuthunyelwe kwakunzima ngendlela engafanele. NGOKUQINISEKILE owesifazane uyazi iBCC. Wenze iphutha. Umugqa weCC ne-BCC ungamamilimitha nje ukusuka kwenye.
Uyavuma ukuthi awazi iBeth Brody noma i-Brody PR. Ungazisho yini izinto ozisho kule posi ebusweni bakhe. Ungasho yini kumakhasimende akhe phambi kwakhe ukuthi kufanele bamxoshe ngoba wenze iphutha ngokungafaki abantu kulayini we-BCC? Angikwazi, ngakho angiyazi impendulo yalowo mbuzo, kodwa ngifisa ukwazi.
Lokhu kuyi-FAR kusuka kugaxekile ababi kakhulu. Awutholi ogaxekile bangempela?
Lo wesifazane wenze iphutha eliqotho futhi impendulo ibingafanele ngokuphelele. Wonke umuntu ophendulile, kufaka phakathi ikhotheshini oyisebenzisile, WAZI ukuthi benzani. Yibo ababegaxaza wonke umuntu, ngokuqaphela. Futhi ngiyaqiniseka ukuthi akusikho okokuqala ukuthi lokhu kwenzeke. Ngingathanda ukwazi imicabango yakho esihlokweni engisibhale ngalesi siqephu:
Imithombo yezokuxhumana "gurus" kanye nama-blogger bangama-jerks wokuziqhenya
Futhi, uma ufuna indaba yangempela ye-PR yehluleka, funda le. Kuyiparter emibili lapho iklayenti lingena khona ngokunyakaza okuphelele ekugcineni.
Sawubona PR, ama-blogger akuwona amathuluzi okufanele asetshenziswe
QAPHELA: Indaba embi yesipiliyoni se-PR. Iklayenti le-PR firm lithathe.
Aug 21, 2009 ngo-4: 59 PM
1. Angizange ngiqale lolu chungechunge olwesabekayo lwezehlakalo, i-dspark. Kuye kwadingeka ngisabele kukho.
2. Le yinkampani YOBUDLELWANE BOMPHAKATHI. Lo ngumSEBENZI wabo futhi, okuthiwa, yi-EXPERTISE yabo. kufana nokubuza ukuthi isiguli esinqunywe umlenze ngephutha akufanele yini sicasuke uDokotela.
3. Kwakuyi-imeyili yezentengiselwano engacelwanga engenakho ukuphuma.
4. Balwakhe ngasese lolu hlu lwamakheli e-imeyili ngaphandle kwabamukeli ukuthi bazi.
Leli bekungelona iphutha eliqotho - bekufanele kuthathe izinyanga ukuhlanganisa lolu hlu futhi banamakhasimende abo UKHOKHELA le nsizakalo. Lokho akulona iqiniso, kuphambene impela - kokubili okubi nokukhohlisa.
Aug 22, 2009 ngo-11: 44 PM
Kumele kukusindise kanzima ukuthi ungakaze wenze amaphutha, uDouglas. Ngiyakuncoma ngalokho, ukungabi namaphutha kakhulu ukuthi ungalokothi wenze iphutha ku-PR.
NginoDavid kulokhu. Ngaphezulu kokungenasidingo, kepha kufanele ngabe usizwile isidingo sokuqhubekela phambili kunokunye okuthunyelwe.
Aug 23, 2009 ngo-4: 46 PM
Angikaze ngithi angizange ngenze amaphutha. Ngenkathi ngenza amaphutha, ngahlangana nemiphumela. Ukube besingenayo imiphumela, besingeke sazi ukuthi kube yiphutha, angithi? Ngixhumana noNkk Brody, ngimthumelele i-ebook yami kwi-Business Blogging, futhi ngacela ukumsiza aqine nganoma yini ayidingayo.
Aug 24, 2009 ku-5: 45 AM
Vele ukwenzile. Konke ukuzidela.
Aug 21, 2009 ngo-9: 20 PM
Angazi ngoDoug, kepha ngingasho izinto ezifanayo kuNkz Brody ngqo uma ngithole ithuba.
Ngicabanga ukuthi empeleni kubi kakhulu kunogaxekile bendabuko. Amafemu ezokuxhumana nomphakathi awabakhangisi. Kufanele babe ngongoti bokuxhumana abaziyo ukuthi iziphi izinhlobo zemilayezo ezizojabulisa izethameli nokuthi imaphi amaqhinga azobathukuthelisa. Uma noma ngubani kufanele azi ukuthi angaqiniseka kanjani ukuthi umyalezo uhamba ngokunembile, kuyinkampani ye-PR.
Aug 23, 2009 ngo-4: 47 PM
Nginalo ithuba. UBeth Brody wangithinta nge-imeyili futhi wacela imvume yami ukucaphuna ibhulogi yami kubhulogi lakhe elisha, Izifundo Ezifundiwe. Futhi ngacela ukuxolisa okusemthethweni - futhi ngakwamukela. Ngicabanga ukuthi uNkk Brody uzolulama kulokhu… ngokungangabazeki.
Aug 21, 2009 ngo-7: 55 PM
Bengihlala ngicabanga ukuthi akekho owaziyo ukuthi iBCC yenzelwe ini. Ngishintshe umqondo wami Ngithola izindaba nokukhishwa kwe-PR usuku lonke ngama (kwesinye isikhathi) AMAKHULU wamakheli e-imeyili ku-TO: field (kaningi amagama nama-imeyili wabo bonke abantu bezindaba esifundazweni sase-Indiana abasuka emsakazweni ku-TV ukuphrinta, iningi labo enginesiqiniseko sokuthi abafuni ukuthi ikheli labo le-imeyili lidluliswe esidlangalaleni, ingasaphathwa eyokuthi ngikholelwa ukuthi lokhu kwephula umthetho wesifundazwe, akunjalo?).
Ngicabanga ukuthi ngenhloso futhi ngamabomu ngomzamo wokwazisa abamukeli ukuthi I-WHO ithole i-imeyili. Okokuqala, kuphakamisa ukuzibaluleka komthumeli ngokukhombisa kubalaleli abanobukhulu ubukhulu bethonya labo. Futhi ngokwenza lokhu, kubeka ingcindezi ecashile (noma mhlawumbe HHAYI ecashile) kumamukeli ukuthi asebenzise okokusebenza. Ngemuva kwakho konke, uma bonke laba bagqugquzeli abakhulu bathola okokusebenza futhi kungenzeka ukuthi bayakusebenzisa, bekungafanele ngabe nami ngiyakusebenzisa?
Iphuzu elisemqoka yileli: impela unenze ukuthi nikhulume ngakho, angithi? Uzibuza ukuthi bangaki abantu abafunda ibhulogi yakho bese bachofoza izixhumanisi ezinikeziwe? Uthini umadala lo sopolitiki? "Ukusakazwa okubi kungcono kunokungabikho nhlobo - vele upele igama lami kahle." Uthathe udobo, umugqa wokuxhuma nesinki. Futhi ngalowo mqondo, wenza umsebenzi wakhe NGOKWEMPELA.
Aug 24, 2009 ngo-12: 46 PM
Lokho kuthakazelisa… kepha sikhuluma ngoBrody, hhayi ikhasimende. Lokho kungaba yinkinga!
Aug 21, 2009 ngo-9: 12 PM
Impendulo yethu kulokhu ithi: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
Aug 25, 2009 ngo-8: 39 PM
Ukwehluleka i-BCC kungukuphelelwa ngamandla kwe-ATD, kepha ku-PR kufanele uthumele ukukhishwa kwabezindaba koxhumana nabo ngobuningi - ukuphela kwendlela ongakuthola ngayo kuwo wonke umuntu ofanelekile ngenkathi kusalindelekile. Ngiyakuqonda ukuthukuthela kwakho kokuthi ikheli lakho le-imeyili lenziwe laziwe - futhi uqinisile ukuzizwa ngale ndlela - kepha, njenge-blogger, ngabe awungethande ukwazi ngezindaba zezindaba lapho zenzeka, futhi zintsha futhi zintsha, kunokuba ulinde ukubuzwa?
Angazi ukuthi kunjani ezifundazweni, kepha lapha eNgilandi izintatheli zibhalisela imininingwane yolwazi yezindaba ngokukhethekile ukuze zithunyelwe izinto ezifanele zona ngabantu ebebengeke bahlanganyele nazo. Yini engalungile ngalokho?
Aug 25, 2009 ngo-8: 45 PM
Futhi, lokhu kungaba i-exec encane ye-akhawunti, umuntu osanda kuqala ku-PR, futhi wenza iphutha. Umonakalisile ngokuphelele. Kungani ungabi lukhuni kangaka? Okungenani iphutha lakhe lalingenacala.
Akudingeki bachithe izinyanga behlanganisa lolu hlu - ungaya kuMedia Atlas, Vocus, Cision noma kunoma iyiphi enye imininingwane yolwazi yemidiya bese udonsa uhlu lwezintatheli, ama-blogger, abahleli, abakhiqizi… noma yini. Ngithumele abezindaba kubantu abayi-227 izolo, namhlanje bengibashayela ucingo bonke ngifuna ukubona ukuthi bafuna ukuyisebenzisa. Nginezindatshana zezingxoxo nokufakwa iklayenti lami kukho. Ingabe lokho akulungile? Cha. Kuyindlela nje izinto ezisebenza ngayo - bayayazi, ngiyayazi, akukho muntu oyikhalela ngakho.
Aug 25, 2009 ngo-9: 54 PM
U-PRMira, Abakwenzile, nalokhu okwenzayo, AKUKHO MTHETHO e-United States. Kufanele unikeze indlela yokuphuma, ngaphandle kwalokho wephula isenzo se-CAN-SPAM. Uyabona ukuthi ubeka inkampani yakho engcupheni? Misa abantu abagaxekile. Faka i-opt-n ​​kusayithi lakho bese uqoqa amakheli e-imeyili ngendlela efanele - ngemvume yabantu. IDougSent from my Verizon Wireless BlackBerry
Aug 28, 2009 ku-11: 38 AM
Angibeki inkampani yami engcupheni, ngoba izintatheli ziyakuthokozela ukuthunyelwa imininingwane efanelekile futhi esesikhathini. Le yindlela esebenza ngayo i-PR futhi iningi labantu lijabule ngokusethwa, abantu abathola ukukhishwa kwabezindaba kufakiwe. Kwesinye isikhathi ungayithumela kumuntu okungahambelani naye, bese bekutshela, uyaxolisa futhi akekho umuntu obhala ibhulogi elibi ngakho.
Ngokusobala angazi ngemithetho eseMelika, kepha njengoba iVocus, Cision, njll, isebenza emhlabeni jikelele (ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi yizinkampani zaseMelika), angicabangi ukuthi kwehluke kakhulu. Ngicabanga ukuthi udala isivunguvungu lapho kufundiswa khona. Akufani nokuthi ukuthumelele i-imeyili mayelana namaphilisi okwandisa umthondo noma ukucela imininingwane yakho yasebhange - lokhu bekungumbhalo wangempela we-PR, okuvunywa ukuthi, waqinisa nokwehluleka kwe-BCC, kepha lokho ubukhulu bayo. Akunasidingo sokusabela ngokweqile.
Aug 28, 2009 ngo-2: 30 PM
Aug 28, 2009 ngo-11: 09 PM
"Le yindlela esebenza ngayo i-PR" akulona iqiniso. Nginobudlelwano namafemu amaningi e-PR futhi awaqongeleli amakheli e-imeyili wabathonya emakethe ngaphandle kwemvume yabo bese bewa-SPAM. Ngingancoma kakhulu ukuthi uphinde ucabange amasu akho. Ungahle uthole imiphumela yamakhasimende akho, kepha OKUNGENZEKA ukuthola imiphumela engcono ngokwakha ubudlelwano obusekelwe kwimvume kukhulu kakhulu.
Ngingancoma ukuthi nawe ufunde imithetho yase-UK ku-SPAM, "Izinkampani zisengabhekiswa 'kubanda' ngezingqwembe ze-imeyili kepha kulezi zikhathi ama-imeyili kufanele abe nesigatshana sokuphuma."